The Gardener: 2011-05-22
မြန်မာပြည်က ဒီဇိုင်နာ ပြည်သစ်တည်ကို ဓာတ်ပုံတွေ edit လုပ်ဖို့နဲ့ avi လုပ်ဖို့ဆိုပြီး တနင်္လာနေ့ကဖိုင်တွေပို့တယ်။ တစ်ပုံကို6MB နီးပါးနဲ့ ၃၂ ပုံပို့လိုက်တာ။ နှစ်ရက်ဒေါင်းလုပ်သွားလုပ်တာ ခုနစ်ပုံတိတိဒေါင်းလို့ရတယ်ဆိုတာနဲ့ မဖြစ်ချေဘူးဆိုပြီး ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးရတယ်။
Slideshow software တွေ download လုပ်ပြီး effect လေးတွေဘာတွေထည့်တယ်။ ပုံတွေက ဆိုင်ကပေးလိုက်တဲ့အတိုင်း ဖြူဖြူဖွေးဖွေးဖြစ်နေလည်းမတတ်နိုင်ဘူး။ မြန်မြန်လေးပြလိုက်မယ်ဆိုပြီး သုံးမိနစ်စာလုပ်တယ်။
နောက်တော့ animoto မှာ နမူနာလုပ်ကြည့်တာ သဘောကျတာနဲ့ တစ်လကို5ကျပ်ဆိုတဲ့ plan ၀ယ်လိုက်တယ်။ projector နဲ့အဆင်ပြေအောင် နောက်ထပ်3ကျပ်ထပ်ပေးပြီး ပိုပြီး resolution ကောင်းတာဝယ်လိုက်တယ်။
မင်္ဂလာဆောင်မှပဲ လူတွေရဲ့ attitude တွေနဲ့ လောက၀တ်တွေကို ပိုသိလာတယ်။ RSVP ဆိုလည်း ပြင်သစ်လို response လုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုပြီး မြန်မာဆန်သူတွေက မပြန်ကြဘူး။ စားပွဲဝိုင်းနေရာချနေတဲ့အထိကို ဘယ်သူက လာမယ်ဆိုတာ မသဲကွဲသေးဘူး။ မသေချာသေးဘူးဆိုတဲ့သူတွေကို ဖုန်းဆက်ဆက်မေးရတယ်။
တစ်ချို့သူငယ်ချင်းတွေကတော့ မဆောင်ခင်တစ်လလောက်ကတည်းက confirm လုပ်ကြတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ပြန်ဆောင်ရင်တောင် လိုက်ဦးမယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။
ရုံးက ဓာတ်ပုံဆရာတွေက မင်္ဂလာဆောင်မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ တာဝန်ယူတယ်။
ရုံးက အသံထွက်ကောင်းတဲ့ညီလေးကို MCee လုပ်ခိုင်းလိုက်တယ်။
ဘယ်အရာကိုမဆို ကြို မစီစဉ်တတ်တာ နှစ်ဆယ့်ကိုးနှစ်ရှိနေတဲ့အတွက် အခုမင်္ဂလာဆောင်ကိုလည်း Jazz ဂီတကလို improvise လုပ်လွန်းလို့ မိန်းမကလည်း မကြာမကြာဆူပါတယ်။ မနက်ဖြန် လက်မှတ်ထိုးမယ်ဆိုမှ ဒီညမှာ ၀ယ်စရာရှိတာဝယ်။ လောကကြီးကိုက chaotic ဖြစ်နေတာ ကျွန်တော်က စနစ်ကျနေတော့ရော ဘာထူးမှာလဲလို့ထင်တယ်။ မိန်းမကတော့ အစီအစဉ်ကျမှကြိုက်တယ်။ လေဆိပ်ကိုသွားရင် ထုတ်ကိုင်ထားရမယ့်ပစ္စည်းတွေကို luggage ထဲထည့်ထားတာမကြိုက်ဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်တယ်။ ဘာမဆို မတူဘူး။
ROM သွားမယ့်နေ့မှာ ကျွန်တော်က ရသအလင်းအတွက် ကြော်ငြာပို့စ်ရေးနေတယ်။ နောက်ကျနေပြီဆိုပြီး မိန်းမက အော်တော့မှ ထပြီးရေချိုးတယ်။ ရေချိုးပြီးတော့မှ သိမ်းထားတဲ့ coat ကိုထုတ်လိုက်တော့ကြေနေတယ်။ ရပါတယ်မိန်းမရယ်၊ မီးပူတိုက်တာပေါ့ဆိုပြီးတိုက်နေတာနဲ့ ပိုနောက်ကျတယ်။ ဒါပေမယ့်ကားအဆင်ပြေတော့ အချိန်မီရောက်သွားတယ်။
Flow plan ရတော့ မိန်းမရေ .. စားပွဲနေရာချတာ ယောကျာ်းတာဝန်ထားဆိုပြီး နာရူတိုဖတ်နေတယ်။ ပြီးတော့ Naruto Anime ကြည့်တယ်။ ပြီးတော့သီချင်းနားထောင်တယ်။ ပြီးတော့ အိပ်ပျော်သွားတယ်။ :P။ စားပွဲဝိုင်းတွေမှာ နေရာချဖို့ MRT ပေါ်မှာစဉ်းစားလိုက်ရတယ်။ မတတ်နိုင်ဘူး။ ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ကိုယ်ပဲ။
ဖိတ်ထားတဲ့လူတွေကို တစ်ခါတစ်လေ မေ့မေ့နေတယ်။ Laptop နဲ့ စာရွက်မပါလာရင် စိတ်ထဲက ပြန်ရွတ်ကြည့်ရတယ်။ လူမပြည့်သေးပါလားဆိုပြီးစဉ်းစားနေတာ နောက်တော့မှ ကိုယ့်အကို ၀မ်းကွဲကိုမေ့နေတာတို့၊ ကိုယ့်နာမည်ကိုယ်ထည့်ဖို့မေ့နေတာတို့ဖြစ်တယ်။
Last minute မှလုပ်တဲ့အကျင့်ကိုတော့ နည်းနည်းတော့ပြင်သင့်နေပြီ။ မလေးရှားကို honeymoon သွားမယ်ဆိုတာ မိန်းမကပြောထားတာကြာပြီ။ နောက်ဆုံး နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်အလိုမှာမှ websites တွေတက်ကြည့်၊ ဟိုတယ်တွေ reserve လုပ်လို့ရမရမေး။ ဘယ်လိုသွားရလဲ လိုက်မေး။ နောက်ဆုံး KL ကို အရင်သွားလိုက်မယ်။ အဲဒီကမှကြည့်သွားကြတာပေါ့ဆိုပြီးလုပ်လိုက်ရတယ်။ ကားလက်မှတ်က တစ်ယောက်ကို ၂၅ ကျပ်ပဲပေးရတယ်။
မလေးရှားငွေလည်း မနေ့ကမှ လဲလိုက်တယ်။ မင်္ဂလာဆောင်ပြီး နောက်နေ့မနက်အစောကြီး ကားဂိတ်ကို ဘယ်လိုပြေးရမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားလို့မရသေးဘူး။ နောက်ဆုံးစက္ကန့်တွေမှာ အမြဲတမ်း အဆင်ပြေနေသေးတော့ စောစောစီးစီး ၀ီရီယဆိုတာကြီးနဲ့လုပ်ဖို့ကို တော်တော်လေးကို စိတ်မပါဘူး။ ခရီးကိုတောင် မနက်ဖြန်ထွက်မယ်ဆိုရင် ဒီနေ့အထိ ဘယ်ကိုသွားမလဲမသိတာကို သဘောကျတယ်။ စိတ်ထဲမှာ ကြိုပြီးရောက်နေတာကို မကြိုက်ဘူး။ မိန်းမကတော့ ခရီးသွားမယ်ဆိုရင် အဲဒီမှာ ဘာတွေရှိလဲ၊ ရာသီဥတုက ဘယ်လိုနေလဲ စတာတွေကို အရင်ကြည့်ထားတတ်တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ ပင်လယ်ကမ်းခြေသွားမယ်လို့စိတ်ကူးတယ်။ မလေးရှားမှာ package tours တွေအဆင်မပြေရင် စင်ကာပူပြန်လာပြီး East Coast သွားမယ်လို့လျာထားတယ်။
Congratulations Vs Best Wishes ???????????
မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ အင်မတန်ဗိုလ်ဆန်တယ်။ မကြာမကြာ Congratulations လုပ်ကြတယ်။ တစ်ခါတစ်လေစာလုံးပေါင်းမှားတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ s မပါဘူး။ singapore မှာနေတာကြာသွားလို့ဖြစ်နိုင်တယ်။ စာလုံးပေါင်းပိုမှားလာတယ်။
Wedding မှာ bride ကို Best Wishes ပြောလေ့ရှိပြီး groom ကို Congratulations ပြောခဲ့ကြပါတယ်။
Congratulations ဆိုတာ တစ်ခုခုကိုအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုပြီးချီးကျူးတာပါ။ ထာဝရကျောင်းသားကြီး (ဘ၀သစ်ဦးအောင်ကျော်) ပြောတာကတော့ သတို့သမီးကို Congratulations လုပ်တာဟာ မြန်မာလိုဆိုရင် ... မိုက်သဟေ့ .. ညည်းပိုင်းလိုက်နိုင်ပြီ ပဲအဓိပ္ပာယ်ထွက်သတဲ့။
အခုခေတ်မှာတော့ ရှေးရိုးအင်္ဂလိပ်စာ တိမ်ကောလာပြီပြောကြပေမယ့် လူကြီးလူကောင်းတွေကတော့ အဲဒါလေးကို မမှားအောင် နှစ်ယောက်စလုံးကို Best wishes ပဲပြောလိုက်ကြတယ်။ အဲဒါက ကွန်ချက်ပြတာပါ ... ဟဲဟဲ ...........။
Game Over in Progress
ဒီလက်မှတ်တစ်ခုဟာ Single ဘ၀ရဲ့ နောက်ဆုံးစက္ကန့်လည်းဖြစ်တယ်။
၁... ၂ ..... ၃ ... သဗ္ဗေသတ္တာ ကမ္မသကာ၊ မကောင်းသူထိပ် ကောင်းသူထိပ် ဆိုပြီး လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တယ်။
လက်ထပ်ပေးတဲ့သူကလည်း တရုတ်သံဝဲ၀ဲနဲ့မေးတာ ဘာမှနားမလည်ဘူး။ I do for all lor ။
Let me recall some sayings for marriage.
Love is blind, marriage is the eye-opener. (Pauline Thomason)
Marriage is an adventure, like going to war. (G.K. Chesterton)
(This is my cute doggie)